Ejiji kachasị mma na mmemme Grammy 2015 - Ụdị
Anya Grammy niile mgbe emechara oriri dị mkpa, nke kụrụ ndị Kardashians, Rita Ora na Miranda Kerr
Ekike oriri na ọ Afterụ Afterụ na-adọrọ mmasị n'ihi na, n'ezie, anyị na-elele ihe ndị ọkachamara họọrọ ka ha kporie ndụ, ọ bụghị naanị maka ịdị mma na foto kapeeti uhie. Ọ dị ka ọtụtụ ndepụta Grammys m yi uwe kacha mma gara n'ụlọ iji zuo ike, n'ihi na ahụghị m ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ahụ na-apụ apụ. Kama nke ahụ, ihu abalị kacha mma nwere ihu ọhụrụ.
Nnukwu nwanne nwanyị Kim Kardashian nwere otu n'ime uwe kacha amasị m site na isi ihe omume, mana ụmụnne nwanyị Kendall na Kylie Jenner na Khloe Kardashian mebiri ya ihe dị njọ ma emechaa. Ụmụ agbọghọ atọ a na -ama jijiji Kardashian M.O. nke ogologo ma na -amị amị na -agbada nke ukwuu na oghere dị elu. Ọ dịkwa mma ịmara: Ọ dị ka Kylie hapụrụ ihe ngosi Kim na nso nso a n'ụlọ maka mgbede. Uwe a nke Steven Khalil dị ka ụdị ụdị ọ kwara n'afọ gara aga.
Rita Ora gbanwere uwe mwụda ọla ọcha ya na-egbuke egbuke, m ga-agwakwa gị: ọ na-amasị m nke silk Dsquared2 mini a na-ebipụta nke ọma. Olu a na -eme ka ọ bụrụ silhouette mara mma, ma ọ bụrụ na ị ga -eweghachi mmanya ole na ole wee gbaa egwu, echere m na anyị maara uwe kachasị dabara na ọrụ ahụ.
Ọpụpụ ojii dabara, wee bata uhie uhie maka Janelle Monae. Were ya dị ka echiche nke mgbakwasa okwu na -aga nke ọma: họta iberibe gị, mana enwela oke ike na ha, ka ị ghara ịdaba n'ihe egwu. Ọ na -eyi akwa mgbe niile na akwa ụmụ nwanyị, mana site na ịgbanwere agba na ibipụta, ọ na -edebe anyị n'ụkwụ anyị.
Ndewo, Miranda Kerr! Supermodel ahụ pụtara na obere kpuchiri diski na-enwu enwu na, n'ihi na ọbụlagodi California nwere ike ị nweta oyi, obere jaket tụbara n'ubu ya. Hụ anya na ngwakọta nke igwe ọkụ dị ọkụ.
Ma eleghị anya, ọ bụ n'ihi na ahụrụ m ya NA! ihe ngosi n'ezie, mana m na -elebara Christina Milian anya n'oge na -adịbeghị anya. Ọmarịcha uwe mwụda pensụl a na anya bustier maka ọmarịcha ịma mma ya nke na -anaghị eme gị ihere.
Jessie J nwere akwa glam mara mma maka kapeeti na-acha ọbara ọbara, mana ọ gbanwere bụrụ ihe dị mfe maka ememme ahụ. Akpụkpọ ahụ na-eme ka ọ maa mma, mana ogologo uwe mwụda pensụl ahụ ga-eme ka ọ bụrụ A-OK maka ọfịs (iberibe dị ka nke na-aga n'ihu n'oge opupu ihe ubi a!). Ihe ịchọ mma ya bụ Jennifer Fisher.
Kedu nlele mgbe emechara oriri na ọ wasụ wasụ bụ ọkacha mmasị gị?
Ụmụ Nwanyị N'afọ
etemeete mara mma ma dị mfe
jay z na beyonce lụrụ
deodorants aluminom na -arụ ọrụ n'ezie
nkezi girth nha nke nwoke